လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး – My Doctor
You are here:Home-All Articles-လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး
By tayzar|2020-01-20T07:35:26+00:00June 26th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
ဒူးနာ၊ခါးနာ၊တင်ပဆုံနာခြင်းဝေဒနာ Osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးနဲ့အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ရမ်းနာကျင်တဲ့ရောဂါဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်တဲ့လူကြီးပိုင်းတွေရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ဒီဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။သူ့အလိုလိုဖြစ်တာမျိုးရှိသလို အဆစ်အမြစ်ရောဂါတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားရောဂါတွေ ဥပမာ- Haemochromatosis ရောဂါ (ခန္ဓာကိုယ်မှာ Iron အလွန်များတဲ့ရောဂါ)၊အဝလွန်ရောဂါနဲ့ အလုပ်အကိုင်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားမမှန်ကန်တာကြာတာကနေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများမှာပိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများကတော့ * ဒူး(သို့မဟုတ်)တင်ပဆုံရိုးမှာနာကျင်လာပါတယ်။ လှုပ်ရှားလိုက်ရင် အဆစ်ကနေ crepitus လို့ခေါ်တဲ့ အသံမြည်ပါတယ်။ * မလှုပ်ရှားဘဲနေတဲ့အခါမှာတောင်မှ နာကျင်မှုကရှိနေတတ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုများရင် ဝေဒနာပိုဆိုးလာပါတယ်။ * အဆစ်အမြစ်တွေက မခိုင်တော့သလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကြောင့် ကြွက်သားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်အားကျဆင်းလာပါတယ်။ * အဆစ်မှာနာကျင်ခြင်း၊ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်ခြင်း၊ အရိုးတွင်ရောင်လာခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်နိုင်တော့ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ * ဒီရောဂါဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊
Men and BPH
By tayzar|2020-01-20T07:36:23+00:00June 3rd, 2018|Categories: All Articles, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
အမျိုးသားများနှင့် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း အမျိုးသားထုကြီးမှာ အဖြစ်များဆုံး အမျိုးသားရောဂါတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။အသက်၆၀ကျော် အမျိုးသားများရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံ၊ အသက်၈၀ကျော်အမျိုးသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဟာ ဆီးကျိတ်ကြီးနေတတ်ပါတယ်။ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့ လူတိုင်းဟာ ရောဂါလက္ခဏာခံစားရမှာမဟုတ်ဘဲ ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ချို့ဆိုရင် လက္ခဏာလုံးဝမပြဘဲ Medical check up လုပ်ကြည့်မှအမှတ်မထင်တွေ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုလက္ခဏာရပ်တွေခံစားရရင် ဆီးကျိတ်ကြီးနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်မလဲ? ဆီးမကြာခဏသွားလိုခြင်း ဆီးသွားပြီးလည်း ဆီးကျန်သလိုခံစားရခြင်း ဆီးသွားလို့ပြီးခါနီးမှ တစ်စက်တစ်စက်ကျခြင်း ညဘက်ဆီးခဏခဏထသွားခြင်း ဆီးသွားရန် ခက်ခဲခြင်း အရမ်းဆိုးရင်တော့ ဆီးလုံးဝမသွားနိုင်တော့တာမျိုးထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နိုင်မလဲ? ဆရာဝန်က သေချာအောင် ဆီးကျိတ်စမ်းသပ်ခြင်းမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန် ( Ultrasound) ကတော့ ဆီးကျိတ် အရွယ်အစား သေချာအောင် ရိုက်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းကြောင့်
By tayzar|2020-01-20T07:37:15+00:00May 26th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
အိမ်မှာနေတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ မတော်တဆမှုများ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားများဟာ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်နဲ့အထက် လူကြီးတွေဟာ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်မက ချော်လဲတတ်ကြပါတယ်။ ချော်လဲတိုင်း အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်အောင် ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရမယ်လို့ တစ်ထစ်ချမပြောနိုင်ပေမယ့် တင်ပဆုံရိုး၊ ပေါင်ရိုးနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ရိုးကျိုးခြင်း ပါင်ရိုး နဲ့ ပုခုံးအရိုးလွဲခြင်း ခေါင်းထိခိုက်မိခြင်း နှင့် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများရခြင်း ဖူးယောင်ခြင်း၊ အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း တစ်ခါချော်လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့် နောင်မှာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုရမှာကိုကြောက်လန့်သွားခြင်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ အိမ်မှာချော်လဲနိုင်တဲ့နှုန်းဟာ လမ်းသွားရင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုထက် ဆယ့်နှစ်ဆပိုများပါတယ်။ ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတွေ ဘာကြောင့် အိမ်မှာ မတော်တဆမှု ချော်လဲမှုတွေဖြစ်ရသလဲ? လူကြီးတွေဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းလာခြင်းနဲ့ ခံစားသိမြင်နိုင်မှုလျော့ကျလာခြင်း ကွက်သားတွေအားနည်းလာပြီး
Body weight and old age
By tayzar|2020-04-01T09:15:33+00:00May 11th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများ ဘိုးဘိုး။ဘွားဘွားတို့ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ကျလာတတ်ပါတယ်။ အသက်ခုနစ်ဆယ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ သိသိသာသာကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ လူမှုရေးပြဿနာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းကတော့ အကြောင်းရင်းမရှိပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ရုတ်တရက် အလျင်အမြန်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာ ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတာကိုပြသတာပါ။ မကြာခင်မှာ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာတော့မယ့် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါသည်တွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ပိုပြီးသိသိသာသာကျဆင်းပါတယ်။ လူကြီးတစ်ဦးဟာ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ လေးရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းလာပြီဆိုရင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းများ (၁) ကင်ဆာရောဂါ နှင့် ကင်ဆာမဟုတ်သော အခြားရောဂါများကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါတွေချို့ယွင်းလာခြင်း (၂)
Appetite in Elderly
By tayzar|2020-05-28T03:31:23+00:00April 28th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားများနှင့် အစားမစားချင်သောပြဿနာ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ အစားနည်းလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ အများအားဖြင့် အသားဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာတာ သို့မဟုတ် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေချို့တဲ့တာတွေ အတွေ့များတတ်ပါတယ်။ ဒီအစားမစားချင်တာဟာ ၁) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘာဝ ခန္တာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုအရ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့အထဲမှာ လျှာပေါ်က အရသာခံ အဖုလေးတွေလည်းပါပါတယ်။ ဒီအရသာခံဖုလေးတွေက အရင်လို ချိုချဉ်ဖန်ခါးကို ထိထိမိမိ သိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သွားလေးတွေက ယိုင်နဲ့လာတဲ့အခါ အစားအစာကို ကျေညက်အောင်မဝါးနိုင်တော့ဘဲ အစာမကြေခြင်း။ အများကြီးမစားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ၂) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကြောင့် ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့မှာ အများအားဖြင့် စိတ်အလိုမကျ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ အစားစားခြင်စိတ်က အလိုလို နည်းသွားစေပါတယ်။ ၃)
By tayzar|2020-01-20T07:41:16+00:00April 20th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
" သစ်အိုပင်ရဲ့ကမ္ဘာ " "ဆရာ ဝင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ" ပြူငှါသောနုတ်ဆက်သံနှင့်အတူ အသက်ငါးဆယ်ကျော်အမျိုးသားတစ်ဦး ဒေါက်တာနှင်းငွေ၏ မိဂသီဆေးခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်။ "ဟုတ်ကဲ့ ဝင်ခဲ့ပါ။ ဘာများဖြစ်သလဲဦးလေးခင်ဗျ။" "ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာ။ ကျွန်တော့အမေကိုပြချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အမေက အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ဆေးခန်းကိုမလာနိုင်လို့ အဲဒါ.. ဆရာများ ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုကြွဖို့ပင့်ချင်လို့ပါဆရာ။" "ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ အဘွားကလာဖို့အခက်အခဲရှိတော့လဲ လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးခန်းရှေ့ကလူနာတွေကုန်အောင်တော့စောင့်ပေးပါဦးလေး။ ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်။" ရောဂါကုသရန်စောင့်ဆိုင်းနေသော လူနာများအားလုံးကုသပြီးသောအခါ ဒေါက်တာနှင်းငွေလည်း ဆေးခန်းခေတ္တပိတ်ကာ အိမ်ပင့်ရန်လာကြိုသောဦးလေး၏ကားနှင့် အဘွားအားကုသရန်လိုက်ပါသွားတော့သည်။ လမ်းသွားရင်း ဒေါက်တာနှင်းငွေက "ဦးလေးရေ အဘွားက ဘာရောဂါများဖြစ်လို့လဲဗျ" "ဒီလိုပါဆရာ။ အဘွားက ကျန်းကျန်းမာမာတော့ရှိပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ သတိမကောင်းတာ ခဏခဏဖြစ်တယ်ဆရာ။ မနေ့ကဆို လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဆုံးသွားတဲ့ သူ့အမျိုးသား (ကျွန်တော့အဖေပေါ့ဆရာရယ်)
Common Eye Problems in Elderly
By tayzar|2020-01-20T07:42:29+00:00April 11th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
အသက်ကြီးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျက်စေ့ဆိုင်ရာပြသနာတွေ အသက်ကြီးရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့.... မျက်စိ ပြသနာတချို့ဟာ... စောစောစီးစီး သိရှိပြီး ကုသမှူ မခံယူဘူးဆိုရင် အမြင်အာရုံကွယ်သွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..... လက်ရှိသုတေသနတွေအရ အမြင်အာရုံအားနည်းတဲ့သူတွေရဲ့ 65% နဲ့.... မျက်စိလုံးဝမမြင်တဲ့သူတွေရဲ့ 82% ဟာ.... အသက်ငါးဆယ်ကျော်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်..... အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့... အသက်အရွယ် ကြီးလာတဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျက်လုံးပြသနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... (1) macula ကျုံ့ခြင်း Macula ဆိုတာ မြင်လွှာရဲ့ အလယ်တည့်တည့် မှာ ရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.... macula ကျုံ့လာပြီဆိုရင် မြင်ကွင်းအသေးစိတ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အလုပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ စာရေးတာ... စာဖတ်တာ...ကားမောင်းတာနဲ့ အရောင်ခွဲခြားတာတွေမှာ
Tips for elderly in thingyan သက္ႀကီးရြယ္အို
By tayzar|2020-03-18T04:02:21+00:00April 7th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
သကြန်တွင်း ဥပုသ်စောင့်မယ့် လူကြီးသူမတွေအတွက် tips မကြာမီ သကြန်တွင်း ကလည်း ရောက်လာတော့မယ်..တချို့လူငယ်တွေက မန်းဒပ်ထိုင်တာ... ရေပက်ခံထွက်တာ.. ခရီးသွားကြတာမျိူးတွေ ရှိကြသလို...တချို့ကျတော့လည်း အိမ်မှာ နားနားနေနေ နားကြတာမျိူးရှိပါတယ်.... လူကြီးအများစုကတော့ တရားစခန်းဝင်တာ.... ဥပုသ်စောင့်တာမျိူးလုပ်ကြပါတယ်.... ဒီတော့ ဒီ သကြန်တွင်းမှာ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ကြမယ့် လူကြီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ tip လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... (1) နေပူဒဏ်ကို သတိထားကာကွယ်ပါ April ဆိုတာ.... မြန်မာပြည်ရဲ့ အပူဆုံးလဖြစ်ပါတယ်... နေပူဒဏ်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်... အပြင်ထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်.... ထီးကိုမဖြစ်မနေဆောင်သွားပါ.... နေမပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲ အပြင်ထွက်ပါ... နေ့လည် ဆယ့်တစ်
By tayzar|2020-01-20T07:47:47+00:00March 24th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
အရိုးတွေနာလို့ ဆိုသော ပြဿနာ.... ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ပရဟိတဆေးခန်း ထိုင်ရမည်။ ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ခြေလှမ်းတွေ သွက်လက်လို့ ပရဟိတဆေးခန်းဆိုတော့ လာတဲ့လူနာတွေက သက်ကြီးပိုင်းတွေချည်းပဲလေ အဲသည်တော့ လာသမျှ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အဆစ်အမြစ်နာ။ ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ရှင်းပြရတာ အာပေါက်မတတ် သူတို့ပြောတာလေး နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်လား အမေကြီး။ ။ဆရာမရယ်၊ ခါးနာတယ်၊ ဒူးနာတယ် အဘကြီး။ ။ဆရာမရယ်၊ ပခုံးဆစ်က နာတယ် အမေကြီး အဘကြီးတွေက အသက် ၆၀ကျော် ၇၀တန်းတွေပါ သြော် အမေကြီးရယ် အိမ်မှာ ဘာလုပ်လဲ ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုတာ အိမ်အလုပ်တော့ လုပ်ရတယ်
By tayzar|2020-01-20T07:48:54+00:00March 16th, 2018|Categories: All Articles, လူကြီးပိုင်း ကျန်းမာရေး|
လူကြီးများနှင့် လိုအပ်သောဗီတာမင် အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ခန္တာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေ အပြည့်အဝရဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အစားအသောက်စားခြင်စိတ်နေတာ၊ သွားမကောင်းလို့မစားတာမျိုးအပြင် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကလည်း စားသလောက်မစုပ်နိုက်တဲ့အခါ အချို့အချို့သော ဗီတာမင်တွေလိုအပ်လာပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ အလိုအပ်ဆုံးတွေကတော့ ဗီတာမင် B12 အာရုံကြောတွေအားကောင်းဖို့၊ သွေးနီဥတွေပုံမှန်ကြီးထွားဖို့၊ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဗီတာမင်ပြည့်ဝဖို့ဆို ငါး။အသား၊ ကြက်ဥ၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေစားဖို့လိုပါတယ်။ Folic acid သွေးအားကောင်းစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Folic acid ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကတော့ အသီးအရွက်မျှတအောင် စားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ calcium အသက်ကြီးလာရင် အရိုးပွ၊အရိုးပါးမဖြစ်အောင် Calcium ဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ Calcium ပြည့်ဝဖို့ဆို ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းစား ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဗီတာမင် D ခေတ်စားလာတဲ့ ဗီတာမင် D ဟာ အရိုးပွခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။